Maraykanka oo duqaymo cusub ka fuliyeey gobalka shabeelaha Hoose – Radio Daljir
Maraykanka oo duqaymo cusub ka fuliyeey gobalka shabeelaha Hoose
Abriil 13, 2019 5:34 b 0
Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn cirka ah ay shalay kula beegsadeen Al-Shabab, meel ka mid ah Gobolka Shabeellada Hoose.
War ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Africa ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in weerarka uu ka dhacay tuulo la yirahdo Garowle, 11-kii bishan, isla markaana ay ku dileen laba ka mid ah Al-shabaab, mootona lagu burburiyay.
Qoraalka Mareykanka ayaa lagu yiri “dadaalada sii socda iyo duqeeymaha lagu wiiqayo Al-shabab waxey qeyb ka yihiin Istaraatiijiyadda Mareykanka uu ku taageerayo hiigsiga Soomaaliya leh horumar dhaqaale, dowlad wanaag iyo hey’ado military oo xooggan.
“Waxaanu sii wadeynaa duqeeymaha aan la beegsaneyno qeybaha kala duwan ee hogaanka Al-shabab,sidaas lagu yiri qoraalka AFRICOM ka soo baxay oo sheegay Maj. Gen. Gregg Olson, oo ah madaxa howlgaladda ee AFRICOM.
Talaadadii ayey aheyd sidan oo kale markii Mareykanka ay duqeyn cirka ah ka geysteen meel ku dhow Magaalada Jilib ee Gobolka Jubadda Dhexe, halkaas oo ay ku dileen mid kamid ahaa dagaalamayaasha Al-shabaab.
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Guddoomiyay Kulan Looga Hadlay Habsami U Socodka Cafinta Daymaha Dalka Lagu Leeyahay
Kenya oo howlgal ka fulinaysa Xadka Soomaaliya